Lungisa iphutha le-Samba 255 (Ukwabelana ngeFolda) | Kusuka kuLinux
Lungisa iphutha le-Samba 255 (Ukwabelana ngeFolda)
Okokuqala, liyini iphutha leSamba 255? Yiphutha esilithola lapho singena Ubuntu (ngokwesibonelo), sizama ukwabelana ngefolda futhi asikwazi ngoba iyasitshela:
I- "share network" ibuyise iphutha 255: net usershare: ayikwazi ukuvula umkhombandlela wabasebenzisi / var / lib / samba / usershares. Imvume Yephutha Inqatshiwe Awunayo imvume yokwenza ukwabiwa komsebenzisi Cela umphathi wakho ukuthi akunikeze izimvume zokwakha.
Lokhu kwenzeke kimi ngenkathi ngizama ukudala ifolda eyabelwe kwenye yama-PC wabasebenzisi bami, ukuze ngikwazi ukushintshanisa amafayela ngokukhululeka ngomshini we-Windows XP osebenzayo I-Virtualbox.
Endabeni Ubuntu isixazululo silula, ngoba ngixazulule yonke into ngokwenza ku-terminal:
Kepha lokhu kungahle kungabi yisixazululo sabanye. Isibonelo, esimweni se-Debian ingaxazululwa kalula futhi ngokungeza umsebenzisi wethu eqenjini le-sambashare.
Bavele bangitshela ngePhalamende ukuthi esinye isisombululo esikhona singeze kufayela /etc/samba/smb.conf ipharamitha: Umnikazi wabasebenzisi kuphela = Amanga
Kepha ake sithi sifuna okunye okuthe xaxa. Kulokhu asifuni ukuthi lisibuze igama lomsebenzisi nephasiwedi ukufinyelela ifolda eyabiwe. Yebo, ngalokhu, esikwenzayo ukudala ifolda ku / media:
Futhi-ke singeza ekugcineni kwefayela /etc/samba/smb.conf:
[imibhalo] comment = Kwabiwe amadokhumenti path = / media / share public = yebo kuyabhalwa = yebo
Yebo, kwezinye izimo kufanele siqale kabusha iSamba:
Manje, kusuka kumshini obonakalayo kufanele ngifake iWindows Explorer:
Futhi ngomumo ..
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Okokufundisa / okwenziwa ngesandla / Izeluleko » Lungisa iphutha le-Samba 255 (Ukwabelana ngeFolda)
Indlela yesibili iyona eyiyo. Ku-Ubuntu kumele kube neqembu futhi lalokhu, ngokunokwenzeka ukuthi umkhombandlela lowo awusiwo oweqembu le-sambashare noma kukhona okungekho ku-smb.conf.
Ukukhishwa kwezimvume ezingama-777 kudala inkinga yokuphepha, kungcono ukuyisebenzisa ngezikhathi ezithile ukuze uqinisekise ukuthi iyasebenza, kepha, uma sekuqinisekisiwe, qhubeka nokulungisa amaqembu kanye / noma ifayela lokumiswa kwe-samba.
Uqinisile mayelana ne-777, kepha umqondo ukuthi "Wonke umuntu" uyakwazi ukufinyelela kuleyo folda ukubhala / ukususa / ukukopisha / ukuhambisa 😉
imikhonzo Elav !!!. Leso sixazululo ngokwabelana kunethiwekhi yasekhaya noma ngokungadingi ukuphepha. Kufana kakhulu nalapho uku-Windows XP, ngaphandle kokuthi ikhompyutha ibhaliswe ku-Domain, sithi Ukwabelana ngamafayela kunikwe amandla futhi sithi Noma ngubani angabhala noma afunde kuzinsizakusebenza ezabiwe. Ngakho-ke, akukho ukuphepha.
Noma kunjalo, ochungechungeni lwe-Samba ngiphoqelekile ukunikela nge-athikili eyodwa noma ngaphezulu ekwabelaneni ngamafolda namaphrinta. Kusuka kunethiwekhi yasekhaya kuye kuseva yefayela enayo yonke imithetho.
Ngicela ukubekezela kwakho maqondana nalokhu, ngoba ukuchaza iSamba akulula. 🙂
Eqinisweni, iSamba ilusizo kakhulu kimi ngoba ngisebenzisa amafolda abiwe futhi ngincamela ukugwema izinkinga ngokulungiselelwa ukwaba amafolda.
ngiyabonga, le ndatshana izosizakala ngephutha uSamba anginikeza lona lapho izama ukwaba ifolda Yomphakathi: D.
Njalo lapho ngizama ukuthumela amazwana ku-Samba: I-SmbClient inginikeza iphutha elilandelayo:
I-Zone 404 awutholanga obukade ukufuna!
Mhlawumbe ulandele isixhumanisi esingalungile noma ufuna idokhumenti eshintshe ikheli. Buyela ekhasini lasekhaya noma sebenzisa injini yokusesha engenhla ukuthola indawo entsha oya kuyo. Noma ungafinyelela ezinye izixhumanisi zentshisekelo ukuthola okudingayo, ngokwesibonelo:
Sawubona, ngisebenzise izimvume chmod -R 777 enkombeni eyabiwe futhi manje ayingivumeli ngingene, ingikhombisa ifolda evela kuWindows kepha lapho ngifuna ukuyifaka ingitshela imvume enqatshiwe, ukuthi ngingakuxazulula kanjani lokhu?
adrian aaae kusho
Nikeza okufanayo kodwa ngokubuyela emuva chmod -R 777 (kuncane ukususa izimvume)
chmod + R 777 kwisikhombi sokusetha izimvume
Phendula ku-adrian aaae
UJORGE FRANCISCO JUAREZ ZUÑIGA kusho
Sanibonani nonke ntambama, ngidinga usizo lwenu:
Ngizama ukuxhuma ama-PC amabili kunethiwekhi ene-Ubuntu futhi ngemuva kwemizamo eminingi ngikwazile ukufaka i-samba futhi ivela kusiqalisi nangemva kokumisa iqembu elisha kuwo womabili ama-PC nokwabelana ngefolda kungithumela leli phutha (kufanele cacisa ukuthi ngikwenze kahle kanye, kepha lapho ngiqala kabusha ama-PC angihloniphi ifolda eyabiwe futhi ngifuna ukuyaba kabusha kungitshela lokhu) «Ipharamitha yokuhlolwa kwe-samba ibuyise iphutha 1: Layisha amafayela we-smb config kusuka / etc / samba /smb.conf
i-rlimit_max: ukwandisa i-rlimit_max (1024) kumkhawulo omncane weWindows (16384)
isexwayiso: Ukuziba inani elingavumelekile 'isabelo' sepharamitha 'yokuphepha' yokulayisha izinsiza
Phendula kuJORGE FRANCISCO JUAREZ ZUÑIGA
I-ORTIZ YOBUKRISTU kusho
yebo ngaleyo ndlela yangisebenzela ku-NVIDIA JETSON TK1
I-net usershare 'ibuyise iphutha 255: i-net usershare: ayikwazi ukuvula umkhombandlela wabasebenzisi / var / lib / samba / usershares. Imvume Yephutha inqatshiwe Awunayo imvume yokwenza ukwabiwa kwabasebenzisi. Cela umphathi wakho ukuthi akunikeze izimvume zokwakha.
Phendula ku-CHRISTIAN ORTIZ